2020-09-17 06:09 Hamro Biratnagar
भक्तपुरका राजु थापाले जग्गा सम्बन्धि विवाद मिलाउने भनेर २५ लाख रुपैयाँ दानबहादुर प्रजापतिसँग लिन्छन् ।
विवाद मिलाउन नसकेपछि प्रजापतिलाई थापाले तत्कालिन एनडिइपी कोटेश्वर शाखाको खाताबाट २०६८ साल बैशाख २ गते २५ लाखको चेक दिन्छन् ।
प्रजापतिले भने सो चेक २०७० सालमा साट्न गएका हुन्छन् । २०७० सालमा थापाको खाता नै बन्द पाउछ ।
थापाले चेक दिएको ४ दिनमा नै एनडिइपी बैंकमा खाता बन्द गरेका हुन्छन् । बैंकले बन्द भएको खाताको चेक बाउन्स गर्न नमिल्ने बताउँछ ।
त्यसपछि प्रजापति जिल्ला अदालत को बाटो हुँदै सर्बोच्मा पुग्छन् ।
« भाेलीदेखि मलमास सुरु, के गर्ने? के नगर्ने?
नेपालसँगकाे सम्बन्ध थप सुधारकाे पक्षमा छाैँ- नरेन्द्र माेदी »